Ciyaaryahan ka tirsan Kooxda Manchester United oo xadgudub sameeyey – Geelle Magazine
Kooxda Manchester United ayaa la hadli doonta difaacooda Marcos Rojo, kaddib markii la shaaciyay inuu ku xadgudbay shuruucda xayiraadaha Coronavirus ee dalkiisa Argentina.
Sawirro muujinaya Rojo oo sigaar cabaya, saaxiibbadiisna kula ciyaaraya bannaaka ayaa lagu shaaciyay baraha bulshada, waxayna qabsadeen hadal heynta inta badan dadka ciyaaraha daneeya, iyagoo eedeymo kala dul dhacay ciyaaryahanka.
Marcos Rojo oo weli ka tirsan kooxda Manchester United ayaa hadda qaab amaah ah kula jooga kooxda Estudiantes, waxaana sawirrada lagu ceebeeyey soo bandhogay walaalkiis Franco.
Sawirradaas ayaa durba laga tiray bartii lasoo geliyey markii hore.
30 jirkan ayaa horay marar badan baraha bulshada loogu maadeystay isagoo lagu dhaliilayo inuu sigaarka aad u cabo.
Dalka Argentina ayaa lagu soo rogay xayiraado dhinaca dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga ah, si loo yareeyo faafitaanka cudurka Coronavirus.
Sida qorshuhu yahay, wuxuu sharciga xayiraadda soconayaa ilaa laga gaaro 10-ka bishan May.
Rojo, waa ciyaartoygii ugu dambeeyey ee ka tirsan horyaalka Premier League-ga ee lagu eedeeyo xadgudub dhinaca sharciga ah.
Ciyaartoyga garabka uga ciyaara kooxda Aston Villa ee isla horyaalka Ingiriiska, Jack Grealish, daafaca kooxda Manchester City Kyle Walker iyo weeraryahanka kooxda Everton Moise Kean ayaa dhammaantood lagu eedeeyey in ay jebiyeen shuruucda ay dowladda soo rogtay iyo talooyinka la xiriira xakameynta cudurka faafa ee Corona.
Tartanka Premier League oo ciyaartoydan mashquulin jiray ayaa hakad ku jira tan iyo bishii March.
Kooxaha Premier League-ga ayaa shir ay 1-dii bishan ku yeesheen internet-ka oo maqal iyo muuqaal ahaa waxay kaga wadahadleen qaabka lagu soo gabagabeyn karo xilli ciyaareedka 2019/2020 ee haatan socday.
Waxyaabaha laga wada hadlay ayaa waxaa ka mid ah in kulamada dhiman lagu qabto garoomo dhexdhexaad ah intii taageerayaashu tegi lahaayeen hadba garoon.
“Qorshaha waxaa ka mid ah in ilaa 10 garoon lagu qabto horyaalka marka dib loo billaabo,” ayaa lagu yidhi warar kasoo baxay kulankaasi.
Premier League-ga ayaa sidoo kale u baahan doona ilaa iyo 40 kun oo qalabka baaritaanada ah si ciyaartoyda iyo shaqaalaha kooxaha loogu sameeyo baaritaan haddii ay noqoto, si loo dhamaystiro 92 ciyaarood ee dhiman, kuwaasi oo lagu ciyaari doono garoomo albaabadu u xiran yihiin oo aan loo ogoleyn taageerayaasha.
Mareykanka oo shaaciyey inuu haayo caddeymo ah in Covid-19 lagu sameeyay sheybaar ku yaalla shiinaha